Global Voices teny Malagasy · Mey 2009
Tantara misongadina tamin'ny Mey 2009
Indonezia: Fitarainana nidirana am-ponja
Adi-hevitra mamaivay eo amin'ny tontolom-bolongana Indoneziana amin'izao fotoana izao ny raharaha Prita Mulyasari, renim-pianakaviana mananjanaka roa. Nametraka taratasy fitarainana an-tserasera [id] nitory hopitaly mamahantena any Tangerang, iray amin'ny tanàna manodidina an'i Jakarta ny anao vavy, kanjo ankehitriny dia iharan'ny fiampangana nandìka ny lalàna toko faha-27 andininy faha- 3 amin'ny Lalàna...
Afrika: Firenena maro no tsy mahatsiaro ny Andron'i Afrika
Ny Andron'i Afrika dia fahatsiarovana isan-taona ny 25 may 1963 izay vanin'andro nijoroan'ny Firaisam-be Afrikaan na ny OUA tany Etiopia. Hetsika maro no nankalazana azy ity tany amin'ny faritra samihafa eran-tany. Nahatsiaro izany vanin'andro izany koa ny mpitoraka bilaogy sy ny mpiserasera twitter ka manoratra mamelabelatra momba ity Andron'i Afrika...
Indonezia31 Mey 2009
Etiopia28 Mey 2009
Amerika Latina20 Mey 2009
Tantara tamin'ny Mey, 2009
Rosia: Veloma mandrakizay ho an'ilay mpilalao sarimihetsika Oleg Yankovsky
Rosia 31 Mey 2009
Maty tany Mosko tamin'ny 20 Mey teo amin'ny faha-65 taonany ilay mpilalao sarimihetsika Rosiana Oleg Yankovsky ary nalevina tao amin'ny Fasan'i Novodevichy roa andro taty aoriana. Mpankafy an'arivony no tonga nanao veloma farany azy tao amin'ny Fanaovana tantara an-tsehatra Lenkom. I drugoi, mpampiasa LJ, dia namerina namoaka sary avy amin'ny...
Amerika Avaratra 31 Mey 2009
Honduras: Horohoron-tany mahery nanetsiketsika ny firenena
Amerika Latina 31 Mey 2009
Nifoha aloha be tokoa i Honduras ny marainan'ny 28 Mey noho ny horohorontany mirefy ‘7.1 tamin'ny maridrefy Richter’ nanetsiketsika ny firenena. 130 kilometatra tany avaratry ny tanànan'i La Ceiba ny foibeny, tany amin'ny morontsiraky ny ranomasim-be Atlantika. Tamin'ny 2:24 maraina, ora tany an-toerana, nanery ireo mponina hivoaka ny tranony tanatin'ny...
Sina sy Hong Kong: sary amin'ny T-shirt ho fahatsiarovana ny hetsika 4 Jona.
Hong Kong (Shina) 30 Mey 2009
Isan-taona, mialoha ny fahatsiarovana ny 4 Jona( Kianjan'i Tianamen , 1989), no tian'ny mponina ao Hong Kong hanaovana fihetsiketsehana hitadiavana ny rariny. Amin’ity taona ity dia ny andron’ny 31 May no anaovana ny fihaonambe ho fahatsiarovana ny faha-20 taonan’izany. Ankoatra izany dia hisy ny fitondrana labozia amin'ny alin’ny 4 Jona izay hiarahan’ny vahoaka...
Israel: Manohana ireo mpiasa mitokona mitaky ny zony ny mpitoraka bilaogy
Israely 30 Mey 2009
Anankiray amin'ny zavatra tena hifantohan'ny mpitoraka bilaogy Israeliana ny fitakian-jo ataon'ireo mpiasa. Taona vitsivitsy izay dia sindikan'ny mpiasa maro miasa amin'ny sehatra tsy miankina toy ny mpandroso sakafo any amin'ny café, ny mpiambina, ny mpanao gazety, no namahana bilaogy ho fitakiana ny zony ary nahavita namorona ady hevitra matanjaka sy...
Japana 29 Mey 2009
Nanomboka tamin’ny fararanon’ny taona lasa teo, tany Japana, nisy fiteny vaovao indray mandehandeha eny. Tsy inona izany fa ny konkatsu 婚活 (fanafohezana ny kekkon katsudô 結婚活動), nosintonina tamin’ilay fehezanteny malaza shûkatsu (就活 fitadiavan-kasa), afaka adika tsotsotra hoe ‘fitadiavam-bady’. Tsy teny vaovao monja ihany ny Konkatsu Konkatsu fa trangam-piarahamonina nipoitra tsikelikely...
Ejipta 27 Mey 2009
Fiji: Fanehoan-kevitra manoloana ny fisamborana ireo nahiahiana ho mpitoraka bilaogy
Fiji 26 Mey 2009
Notaterina teto amin'ny Global Voices vao tsy ela akory izay fa notazonin'ny polisy ireo solosaina findain'ireo olona telo nahiahiana ho mpitoraka bilaogy ao amin'ny vohikala Raw Fiji News manohitra ny governemanta. Ireo mpanao lalàna telo, ankoatry ny maro hafa, dia notononina anarana vao haingana tao amin'ny vohikala Real Fiji News...
Amerika Latina 26 Mey 2009
Mihofahofa, any amin'ny tontolon-tserasera liana amin'ny mety ho fiantraikan'ny aterineto amin'ny fanabeazana, fikarohana ary amin'ny taranja hafa ho fampandrosoana, ny saina mena raha namoaka ny didy hitsivolana laharana faha-6649 ny governemanta venezoelàna. Te-hanafoana ny “fandaniana amin'ny tsy antony”na “rendrarendra” ao amin'ny fandaniam-bolam-panjakana manko ny didy hitsivolana ka tafiditra ao aantin'io...
Bahrain 25 Mey 2009